ဝဲဘက်ကလူသည် ရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကို ဖြစ်သည် / Zaw Aye Mg / Facebook
By နန်းလွင်နှင်းပွင့် 22 April 2018
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်းဒင်ကျေးရွာ လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်သည့် ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား အမှုဆင်ဖမ်းဆီးရန် ရဲမှူးချုပ် တင်ကိုကိုက ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရားလိုပြသက်သေ ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်က တရားခွင်တွင် သောကြာနေ့က ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသ နယ်စပ် လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် နယ်ခြားစောင့်ရဲကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ Border Guard Police -BGP (ဌာနချုပ်) တွင် ကွပ်ကဲရေးမှူး ရဲမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
BGP သည် ယခင်က နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (နစက) လက်အောက်တွင် ထားရှိသည့် မောင်တော ဒေသ၊ နယ်စပ်ရဲစခန်းများနှင့် ရဲကင်းများကို လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
BGP ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သည် လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများအရ သတင်းစုံစမ်းေထာက်လှမ်းရေး၊ နယ်မြေလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေး စောင့်ကြည့်ရေး၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မှုခင်းများ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး၊ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေး ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ နယ်နိမိတ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြပ်ရေး၊ နယ်မြေခံ တပ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
BGPသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအနေဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ တရားမဝင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုများ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် လူဦးရေ တိုးပွားမှု စောင့်ကြပ် ဆောင်ရွက်ရခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရပြီး အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း တာဝန်များ အနေဖြင့် အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေး၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများေ ဖာ်ထုတ် ဖမ်းဆီးရေးတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရသည်။
နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတာဝန်များအနေဖြင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်ဘက်နှင့် နယ်မြေ လူထုအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေ ကယ်တင်ရေး၊ အမျိုးသားအဆင့် ဘေးအန္တရာယ်တုန့်ပြန်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းတာဝန်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ထုံးတမ်းများကို လိုကနာပြီး နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး တိုးတတ်စေရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးဟူသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရသည်။
ထို့နောက် ရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုသည် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ် (၁) လုံခြုံရေးရဲကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့မှူးရုံး၊ ကွပ်ကဲရေးမှူးအဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထိ တာဝန်ကျပြီး ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမှတ် (၂) လုံခြုံရေးရဲကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့မှူးရုံး၊ ကွပ်ကဲရေးမှူး အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ယူရသည်။ ထိုရာထူးကို ယနေ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် – သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား အမှုဆင် ဖမ်းရန် ရဲမှူးချုပ် ကိုယ်တိုင် စီမံခဲ့ကြောင်း တရားလို သက်သေထွက်ဆို
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Who is Brig. Gen. Tin Ko Ko? တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်)
Topics: ရိုက်တာ သတင်းထောက်, ရဲမှူးချုပ် တင်ကိုကို, အမှုဆင်